Wararka Maanta: Arbaco, May 22, 2013-Dabeyshii Oklahome oo Khasaare Xooggan Gaarsiisay Kumannaan Ruux iyo Madaxweyne Obama oo ka hadlay (SAWIRRO)
Duufaantaan oo lagu tilmaamay in ay ka mid ahayd kuwii ugu xumaa ee abid soo mara Mareykanka ayaa la xaqiijiyey ugu yaraan in ay ku geeriyoodeen 24 ruux, oo ay sagaal ka mid ah caruur ahaayeen, halka ay ku dhaawacmeen boqolal kale, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka.
“Wararkii hore ee khasaaraha dhimashada gaarsiiyey 51 waxaa sabab u ahaa meydadka qaarkood oo labo mar la tiriyey,” ayey tiri Amy Elliott oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee gobolka Oklahoma, iyadoo intaasi raacisay “Waxaan helnay war wanaagsan. Nambarka dhimashadu hadda waa 24.”
Gudoomiyaha gobolkaasi Oklahoma Mary Fallin ayaa sheegay in ay deg deg noqonayso in si dhab ah loo xaqiijiyo tirada dhimashada, maadaama ay wali howshu socoto.
Telefishinada dalka ayaa baahinaya muuqaallo xanuun badan oo muujinaya dhismeyaal saqafkii kore dabeyshu qaaday iyo kuwo gabi’ahaan burburay oo ay wali hoostooda kooxaha gurmadku ka raadinayaan dad nool.
Goobaha burburay ee ay dabeyshu waxyeelaysay ayaa waxaa ka mid ahaa iskuullo waxbarasho oo ay dhiganeyeen caruur da’yar, kuwaasi oo ka mid noqday dadka dhibaneyaasha ah ee ku waxyeeloobay mashaqadaan.
“Labada iskuul ee Plaza Towers Elementary iyo Briarwood, midkoodna ma lahayn qolalka bedbaadada, kuwaasi oo iska celinkaray xawaaraha iyo awooda culus ee ay wadatay dabeyshu,” ayuu yiri Albert Ashwood oo ka tirsan waaxda gurmadka deg-degga ah ee gobolka Oklahoma.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo galabtay gelinkii dambe ka hadlay wixii ka dhacay Oklahoma ayaa u duceeyey dadkii ku noolaa magaalada Moore ee ay dabeyshu waxyeelaysay, isagoo sidoo kalena ku dhaawaqay gargaarka dowladda dhexe.
“Dadka Moore [magaaladda dabeyshu burburisay] waa in ay ogaadaan in dalkoodu uu baaqi’yahay, islamarkaana uu garab taagan yahay, waxkasta oo ay nagu qaadataba,” ayuu yiri.
Madaxweyne Obama ayaa cadeeyey in ay balaaran tahay musiibada ka dhacday Oklahoma, isagoo madaxda qaranka ugu baaqay in ay ka qeybqaataan, oo ay ku biiraan dadaalada samata-bixinta.
Gargaarka uu ku yaboohay madaxweyne Obama ayaa waxaa u baahan kumanaan ruux oo deegaanadoodu ka cararay, islamarkaana guryahoodu waayey oo ay dabeyshu banaanka dhigtay.